यो कार्टुन ओलीको होइन
या कार्टुन, विधिको शासन चलने, नैतिकतालाई प्रमुखता दिने र लोकलज्जा नै जहाँको नेतृत्वको मापन छ, त्यो देश बेलायतको हो । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको हो ।
संविधानमा वाक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत हकाधिकारको कुरा लेखेर सही ठोक्ने, संविधानलाई उत्कृष्ठ भन्नेहरुले नागरिकलाई गीत गाउन दिदैनन्, जो पढेकै छैनन्, उनीहरु शव्द शव्दको व्याख्या गर्छन्, जो लोकलज्जा कायम गर्न सक्दैनन्, उनीहरु सभ्यता सिकाउँछन् र कविता लेख्नेलाई धम्क्याउँछन् । गीत गाउनलाइृ जेल कोच्छन् । सडकमा असन्तुष्टि पोख्यो भनेर घोची घोची मार्न तम्सिन्छन् ।
बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई सुँगुर बनाएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने छुट छ । बेष्ठ मिनिस्टर पद्धति अपनाएको नेपालमा सत्तासीनहरुको जयजयकार गरेर आरती गए राम्रो, अन्यथा कोपभाजनमा पर्नुपर्ने छ । स्वतन्त्र नागरिक समाजले आलोचना गर्छन्, सत्तासीनहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अरिंगाल बनेर झम्टिन आदेश दिन्छन् । अनि कतिपय नेताहरु छौंडा छोड्ने धम्की दिन्छन् । यो कस्तो प्रजातान्त्रिक संविधान आयो, सरकार चल्यो ?
कुनै नागरिक समाज, पत्रकार, व्यङ्गकारको यसरी प्रधानमन्त्रीलाई सुँगुर बनाएर उनका निर्णय गलत छ, सुधार गर भनेर भन्न सक्छन् ? कम्तिमा नेपालको लोकतन्त्रमा यस्तो छुट छैन, स्वतन्त्रता छैन । जो असन्तुष्ट छन्, उनीहरुले मुखमा बुजो कोचेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मान न मान, मै तेरा मेहमान । जनतलो चुनाव के जिताए, जनताबाट पञ्चापत्र नै पाउसरहको फूर्ती लगाइरहेका छन् सत्तासीनहरुले । जनताले प्रत्याह्वान गर्ने सुविधा संविधानमा लेखेको भए यो दुई तिहाइ भन्ने सरुकारको हालत के हुन्थ्यो होला । नेपालमा दुई तिहाइलाई हेप्ने भनेर जुन अधिनायकत्व सुरु भएको छ, यसले अर्को जहानियाँ शासनको संकेत गरेको छ, जुन आमनागरिकलाई पाच्य भइरहेको छैन । तर गर्ने के ?